सुशीलको १२ सत्ताइस चिन्तन – बाह्रथरी कुरा
सुशीलको १२ सत्ताइस चिन्तन
चित्रगुप्तको आँगनमा सुशीलको १२ सत्ताइस चिन्तन
जय नेपाल साथीहरु !
चिन्नुभएन? म त्यही माघ २५ गते उ भएको (मरेको) पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति, आजीवन कुमार, ३ वटा मोबाइलका धनी श्री सुशील कोइराला । मरेपछि था पाएँ, यो चित्रगुप्त भन्ने मान्छे सारै उ (लोसे) र’छ। मर्नै पर्ने मान्छे पनि किन उ भइरा’छन् भन्ने बल्ल थाहा भयो। धेरैपछि सान्दाजु, गिर्जाउ, किसुनजीसंग भेट हुने भो भनेर उ भा’को (खुसी), यता यी बाजेले उ गरेकै (हिसाब) छैनन्।
उता कंग्रेस पार्टीको मा’दिवेशन छोडेर, फेरि सभापति हुने मौका छोडेर आएँ, यता यो चित्रेगुप्त बुढोले बैशाखको भूकम्पमा परेर मरेकाको हिसाब किताबै सक्या रैन्छ, मेरो पालो आउँदा म उ (बुढो) भइसक्छु जस्तो छ। हिजो साँझ गिर्जाउसँग उ भयो (टेलिफोनमा कुराकानी)। दाजुले कि पृथ्वी गएर उ गर (सभापतिमा चुनाव लड्), कि यता आइज भनेर थर्काउनु भो। यता आफू उ भइयो (दोबाटे)। हिसाब किताबै नगरी यो बुढोले मलाई किन उ गरेको होला (लिन पठाएको)। कम्तिमा २ महिना उ गरेको भए (पर्खेको) पाटी सभापतिमा उ गर्थेँ (जित्थेँ)।
काँग्रेस पाटी रुख जस्तो बुढो भइसक्यो ! गिर्जा’उ उ भएदेखिदेखि नै पाटीमा उ भएको (नेतृत्वको अभाव) हो। कम्तिमा गिर्जा’उले ‘म के भन्छु भने…. म यो भन्छु’ भन्दै मान्नेलाइ मनाएर, नमान्नेलाइ घोक्राएर भए नि पार्टी त चलाउनु भएको थियो। मैले पनि पाटीलाई उ गरेकै थिएँ (एक ढिक्का)। तर, अहिले आ’र ऐेरे-गैरे सबका सब सभापति भन्दै उफ्रेका छन्। यो झुसे कत्तिखेर उ होला र उ गरौंला (मर्ला र अपुताली खाम्ला) भनेर ढुकेर बसेका र’छन् सबै।यता सभापति उ भा’को छ (मरेको), उता उनरलाई कन्भेन्सनको हतारो। १ वर्ष पार्टी सभापति पद उ गरेको भए (खाली राखेको) के बिग्रन्थो?
दिन लागेपछि उ हुन्छ (टुप्पाबाट मर्दै आउँछ) भन्थे, त्यही भो। यसपाली सभापतिमा फेरि उ गरौंला र पर्धानमन्त्री हुँला। पाटीलाई कोइरालाकै उ गरौंला (जिम्मा लाउँला) भन्ने उ गरेर बसेको मान्छेलाई थाहै नदिई उ गरे यमदूतहरुले (बोकेर हिँडे)। म बिरामी छु भनेर बाहिर फुक्दा सिधै शेरेले उ गर्नसक्छ (जित्नसक्छ) भनेर यो खबर उ गर्न (गोप्य राख्न) अतुलहरुलाई भनेको झन्। युवा हुँदा के गरिएन। एरोप्लेन नि हाइज्याक हानियो, क्यान्सरलाई नि जितियो। यति बेला पनि हल्का दम मात्र हो जस्तो लाग्दैथ्यो। तर यमराजले सुटुक्क दूत उ गरेछन्। ति करबिर भन्ने डाक्टर पनि बिहानै बेलुकै उ गरिराख्थे (चेक)। तिनले पनि यमराजका दूत आएको उ गरेनछन्। बेलैमा अस्पताल पुग्न पाको भए, यमदुतहरुलाई उ गर्न सकिन्थ्यो कि (झुक्याउन)!
भित्रबाट थिंक गर्दा त उ (ठीक) नै भा’छ। उक्साहटमा लागेर अस्ति प्राइमिनिस्टरको इलेक्सनमा उ भएँ (हारेँ)। यो जेनेरल कन्भेन्सनमा पनि हार्‍या भए त कोइरालाकै उ (बेइज्जत) हुनेथ्यो। अनि मैले सान्दाजु र गिर्जाउका अघि कसरी उ देखाउन (मुख) सक्थेँ? आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नेको घेराबन्दीमा परें म।
यता मलाई यमदूतहरुले उ गरेपछि उता नरहरीजीकोमा दूतहरुले उ गरेछन्। कस्सो मैले बेलैमा उ गरेर उ गर्न सकियो (थाहा पाएर कन्भिन्स गर्न)। मलाई लिएर यमदूतहरु उ गरिरा’को बेला (हिँडिरहेको बेला) नरहरीजीले उ गर्नुभएछ (छिर्के लाउनुभएछ), यमदूतको उसको (रीसको) शिकार हुनुभो। अहिले त निक्कै उ भइसक्नुभ’छ (तंग्रिसक्नुभ’छ)।
म यता आएपछि त शेरेलाई त उ भइगो (बाख्राको पुच्छर काटेजस्तो)। जिब्रो डामेको इन्ट्रेस्ट खाँदैमा उ भइँदैन (नेता) भनेर कस्ले सम्झाइदिने त्यसलाई। नाम मात्रै शेर भो, बानी भने ठ्याक्कै बिरालाको छ। कैले अमेरिकन एम्बेसी त कहिले दरबार। लुसुक्क जता पनि उ गर्छ (लस्किन्छ)। डेमोक्रेसीका लागि उ गरेको भन्दै उबेला जिन्स प्यान्टमा फलास टास्याँ बेल्ट ला’को फोटो हाल्दै उ गरिरा’छ (भोट मागिरा’)। हैन कस्तो उ (लण्ठु) र’छ, राजनिती यति तरल भा’को बेला इतिहाँसको ब्याज खान खोजेर नि हुन्छ त? भोलि उ गर्छु भनेर यसो खाका पो देखाम्न पर्छ त। घरी घरी त त्यो शेरेको जिब्रो डाम्या हो कि दिमाकै डामे त्यो बेला पुलिसले भनेर मलाई उ लाग्छ (शंका) । पार्टी बाल दिएर प्रधानमन्त्री भा’को बेला प्रजातान्त्रिक काँग्रेस भन्ने खोलेर हिंड्नेले उ गर्छु भन्छ (पार्टी युनाइट) । मसँग भा’को तिन्टा मोबाइल मध्ये त्यो बलियो वाला नोकियाले उ गरम् झैं भा’को छ अहिले। तर याँ’ट हानेर त्याँ उ नहुने र’छ।
शेरेलाई मात्र के भन्नु। त्यो रामचन्द्रे पनि कस्तो उ र’छ भने (हौंस नपरेको)। म यता उ गरेको तेस्लाई जति उ त अरु कस्लाइ पुग्या होला र (मरेको फाइदा)? कार्यवहाक सभापतिको शिउर लाउन, मलाइ जलाउन नि त्यसलाइ कति हतार भ’को? त्यो मलामी जाँदा खुसीमाथि दु:खको उ गरेको (मास्क लगाएको) छर्लंग्गै देखिन्थ्यो! एक दर्जनभन्दाबढीपटक उ गर्दा पनि प्राइमिनिस्टर नजित्दा पनि मेरो उसमा जीत छैन भनेर किन नबुझ्या हो, छुचुन्द्रेले ! एउटो प्राइमिनिस्टर जित्न नसक्नेले सिङ्गो पार्टी उ गर्छु भन्छ (हाँक्छु) । मसँग बिपी पुत्र छन, मै सँस्थापक हुँ भन्दै हिँड्या छ झ्याक्ने। त्यो टाउकाको ढाका टोपी झिकेर मुखाँ उ गर्दिम् झै झोँक चल्या छ मलाइ।
ए बाबाठाकुरे हो, अरु त अरु, त्यो भङ्गेरे छाती फुलाएर हिँड्ने किस्नेले समेत उ गरो (सभापतिमा उमेदवारी)। हत्या आंतकलाई उ गरेर हिँडेको पार्टीलाई पिस प्रोसेसमा ल्याउने बेलामा गिर्जाउले उ गरेको (विश्वास) सम्झेर उसले त काँग्रेस नै आफ्नो पुस्तैनी उ जस्तो गर्न थाल्या छ। सिलौटोले थिच्या ज्यान छ, काँग्रेसको हेभिवेट हुँ भन्दै ध्वाँस दिँदै हिंड्या छ । साढु भन्दै ज्यानामारा प्रचण्डसँग उ गर्दै (कुम मिलाउदै) हिँड्यो उबेला, झापाली खुराफाती दिमाग लाउँदै जता पनि ठिक्क, जोसँग नि रिटिकक्क ! हारि सक्या माउवादी २ बर्षमा सकिन्थे सेनाले भुटेर, पिस प्रोसेसमा ल्याएर झन उ गरे। मैले उबेलै गिर्जाउलाई पनि उ गरेको थेँ, गिर्जाउ, टेररिस्टसँग नो कम्प्रोमाइज। तर गिर्जाउका उसका अगाडि (जिद्दीपन) मेरो केही जोर चलेन। पहिलो संविधानसभाको इलेक्सनमा पाटीलाई उ गर्ने (कमजोर बनाउने) को हो? त्यही सिटौला। अहिले पुरै काँग्रेस बनेर हिँड्या छ। धन्न धन्न माउवादीमा गइसक्या कुरा कार्यकर्ताले उ गरेका छन् (महसुस)।
अझ सुन्दा नि उ लाग्ने कुरो (उदेक) त त्यो सुजातेले धम्क्याउन उम्मेदवारी दिंदा पो थियो त। धन्न लास्टाँ फिर्ता लिई। जवानीमा सप्रिएको मुला खान परेर जर्मनीको केटोसँग उ गरी (बिहे)। गिर्जाउलाई धृतराष्ट्र झैं बनाएर लाउडा कान्ड गराएर आरएनएसी ध्वस्त पारी। आफु त झोस्ट बनेर जात फाली फाली, छोरीलाई पनि भिओपाइपी माफियासँग उ गरेर पठाइ र झन्डै टेलिकम डुबाकी ! धन्न पारसले गोली ताकेर तेसलाई नौंडाँडा काट्न बाध्य बनाए। अब उसले नेपाली जनता र कंग्रेस पार्टीलाई उ गर्छे रे। कोइरालाको नाक एकचोटी हैन पटक पटक काटेकी हो । गिर्जाउका छोरी भएर मात्र हो, नत्र त्यो उबेलै सकिन्थि, जर्मनीमा उ गर्दै बस्या हुन्थी (भाँडा माझ्दै)। यस्ती सभापति भकि भए त म आफूलाइ भुपु सभापति हुँ भन्न नि उ लागेर आउँथ्यो। अब म उ (मर्दिन्छु) गर्छु भनेर घुर्की नि लाउन नि पइाउदिनँ, मरिसक्या मान्छेको आत्मालाई नि उ गर्न (डस्न) छोडिन यसले।
ल, चित्रगुप्तकोमा मेरो पालो आएजस्तो छ। नाम उगर्दै छन्। मैले यहाँबाट त्यहाँ उ गर्न मिल्दैन। तर बेलाबेला रेडियो, टिभीमा उ गरेर त्यहाँको जानकारी लिँदै गर्छु। आफूले उ गरेको पार्टी (हुर्काएको), माया लाग्छ नि। तर मरेपछि के को पार्टी, के को उ।
अन्तिममा म एकपटक नेपाली कंग्रेस भन्चु, तपाइँहरु सबैले उ भन्नुस्।
(गत माघ २५ गते दिवंगत हुनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालासँग नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको सन्दर्भमा १२ थरीको स्वर्ग ब्यूरोले गरेको कुराकानीमा आधारित)
This entry was posted in राजनिती. Bookmark the permalink.
One thought on “सुशीलको १२ सत्ताइस चिन्तन”
खास्साको रच्छ !